192 trays-dphg080s-g လက်ကမ်းစာစောင်နှင့်အတူအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက် 500kg နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက် | Twesix
ခြောက်သွေ့သောအခန်းနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက် .Dehydrating Ginger ။ ခြောက်သွေ့သော leek ။ ကြက်သွန်ဖြူခန်းခြောက်။ ရေခန်းခြောက်သောကြက်သွန်နီ။ ရေခန်းခြောက်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်။
1. ဤစက်သည်အခြောက်ခြောက်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အပူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းရွှေ့ပြီးခြောက်သွေ့သောအမြန်နှုန်းသည်မြန်ဆန်သည်။
3. အိတ်စစ်သည်အိတ်ပေါင်းစုံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး stati-static anti-static ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်လုံခြုံသည်။
4. အသေသတ်ခြင်းမရှိ, သန့်ရှင်းရေးလွယ်ကူသော။ GMP ၏လိုအပ်ချက်များကိုအတည်ပြုသည်။
Twesix Howedial 500 ကီလိုဂရမ်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်စက်စက်သည် 192 trays-dphg080s-Gလက်ဂိုးနှင့် Follale-Foshan Shunde Twesix Energy Compresse Twesix Energy Compressor နှင့် Schneland Energys နှင့် Schneland Energy နှင့် Schneland Energy နှင့် Schnelider Compressions
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ, Twesix နှင့်အတူအရှိန်အဟုန် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်လက်ရာကိုတင်ဆက်။